Aluminium Mbiri, Aluminium Casement Window - Fenan
Isu tinobatsira nyika kukura kubva 1988
Fonera Tsigiro 86-591-83669891
Email Tsigiro sale@foenalu.com
Aluminium Mbiri Yekuvaka
Aluminium Mbiri yeindasitiri
Aluminium Mbiri ye Window System uye Curtain Wall
Aluminium Inotsvedza Window
Kutsvedza uye Casement Yakasanganiswa Window
Aluminium Inotsvedza Door
Solar Rack Sisitimu
Ground Gomo Solution
Isu tino vimbisa kwazvo kuti ndiri nyanzvi aluminium zvinhu kugadzira
Yakatangwa muna1982, Fujian Fenan Group ikozvino izere bhizinesi hombe, inonyanya kugadzirwa nekugadzira aluminium profirini windows system, isina huturu machubhu uye chidziro madziro ongororo. Chinzvimbo pakati peChina Pamusoro pe5 Aluminium Mbiri Vagadziri, Fenan boka rinofukidza nharaunda ye
1,332,000 mativi emamita, dzimba 4 kugadzirwa sosi (Fujian Fenan Aluminium Viwanda Town, Henan Fenan Aluminium Shorobha, Fenan Window System Industrial Park uye Fujian Fenan Stainless Simbi Production base) Fenan Boka kumisa iyo Fujian Fenan Smart W&D system Co Ltd muna 20 14 kusvika. kuvandudza uye kushanda iyo Fenan hwindo & musuwo system, yakavakwa yekutanga O2O pamitsetse shopu muindasitiri-fenan E-shop
FOEN aluminium kupeta gonhi. Yakatenderwa neNAMI uye AAMA standard. Isu tiri nhengo yeAmerican Architectural Vagadziri Association uye vimbiso yemakore gumi waranti. Kwakanaka kurapwa kwepasi neupfu hwekudhinira kunoratidza inonakidza uye yakapfupi chimiro. Pamusoro-yakaturikwa chitubu chemidziyo uye chaicho bhora rinotakura roller system inosimudzira kushupika nekunyarara kushanda uye hupenyu hwebasa hwakareba. Iko kuchenjera kwekugadzira hinge uye rubebr inodzivirira iwe kuvhara maoko ayo akanyanya kuchengeteka.
FOEN yekuratidzira imba inoratidza yakawanda majuru ezvakagadzirwa izvo zvakagadziriswa kuti zvisvike zvinodiwa nevatengi munzvimbo dzakasiyana dzenzvimbo uye zvekushongedza mafashoni. isu tiri Tarisa pane yakakwirira-kuguma kuchengetedza masuo uye Windows. Inoshongedzwa nehungwaru yekuvhara basa rekuchengetedza zvakanyanya. Iine simba rakasimba rekuita, tekinoroji yepamusoro uye yakarongedzwa, suite yakazara yezvigadzirwa, inosanganisira Bi-fold mikova nemahwindo, Stacking uye Sliding magonhi nemahwindo, Aluminium hinged masuo, Awning uye Casement windows, Aluminium neGirazi Louvres, Pool fenzi, etc.
Fujian Foen Aluminium co. Ltd yakavambwa muna1982, iri muFuzhou guta reChina, inovhara nzvimbo yemamirimita 1,333 zviuru zvemamirita nevashandi vanopfuura makumi matatu nemazana matatu. Isu tiri nyanzvi yekugadzira muChina kugadzira iyo aluminium profiles, aluminium hwindo uye gonhi system, chidzitiro chetambo uye solar bracket.
Anodized Aluminium profiles T-slotted
Aluminium mafaira eSliding Door
Powder Coating Hwindo Aluminium profiles
Kunyanya-yakashandiswa Industrial shamba Aluminium Mbiri
Mhando dzakasiyana dzeAnodized Colour windows Aluminium Pr ...
U Chanel Tube yakagadzirwa neAluminium yeIndasitiri
Structural Aluminium Profaira neyekurapa kwepasi
1.25 Aluminium Tube Yakagadzirirwa Extrusion
Aluminium Mbiri yeWindows Window uye Curtain ...
Kana iwe uchida maindasitiri mhinduro ... Isu tinowanikwa iwe
Isu tinopa mhinduro nyowani dzekufambira mberi kwakasimba. Boka redu revashandi rinoshanda kuti riwedzere kubereka uye riite mutengo mumusika
(Tarisa pane FOEN) Kuchengetedzeka kwemasuo uye W ...
2019 Girazi -Tech International Door & ...
Runako rwekunyorova, Iyo nyowani maitiro o ...
Chigadzirwa mepu yepanyama